Ihe omuma ihe omuma na nkwekọrịta nke ime SEO onwe gi na Hiring Agency
Ọ bụrụ na ịchọrọ ntanetị n'ịntanetị na engines ọchụchọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị,ị ga - achọ ọrụ SEO dị mma iji rụpụta ihe ndị dị mma. Ọrụ SEO ọrụ nwere ike ịnye gị site n'aka SEO ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ị nwere ikekpebie ime ihe ndị ahụ n'onwe gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị jikọtara ọdịnaya dị nro ma ọ bụ nnukwu niches asọmpi dị ka ibuọnwụ, ahụike ma ọ bụ ọrụ ego, ime SEO onwe gị nwere ike isi ike. Ọnọdụ a nwere ike ịhapụ gị na ndị na-esonụnhọrọ:
Ịmụta SEO onwe gị
Onye ọkachamara n'ime ụlọ
Ngwá ọrụ na mpụga na-achọ inweta ndị ọkachamara nwere ahụmahụ nke na-akwado ọkwaweebụsaịtị na organic search. Njikarịcha maka engines ọchụchọ bụ usoro ogologo na mgbe mgbe, ọ na-aga ngwa ngwa na ejighị n'aka. Na-etinye egoụfọdụ ego na oge nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe maka ogo ọchụchọ. Mgbe ị dị njikere ime SEO onwe gị, ọ dị mma ịtụleihe ndi choro, choro na ihe di iche iche nke na-emetuta SEO. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ndị na-eme ya maka ọrụ gịna ngwa ngwa. Nhọrọ ikpeazụ ga-achọta ụlọ ọrụ SEO a ma ama nke nwere ahụmahụ na ogo weebụsaịtị.
Nik Chaykovskiy, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-enye ntụziaka maka otu ị ga - esi kpebie imere SEO dị mma.
1. Ọnụ ego na-akwụ ụgwọ
Ihe ego bụ ihe dị mkpa kachasị mkpa. Ịmụ iheSEO maka ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịbụ echiche zuru oke. Otú ọ dị, ị nwere ike ịmara ngwa ngwa na ị nwere ike ịchọrọ otu otu ọkachamara nwere ahụmahụelu elu. Imirikiti ndị na-ere ahịa n'Ịntanet nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ruru 500usd..Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na - eme SEO maka nnukwu ụlọ ọrụ, ndị aọnụ ọgụgụ nwere ike ịbawanye ruo 10000usd.
2. Ahụmahụ / arụmọrụ ihe
Ụlọ ọrụ SEO nwere ndị ọkachamara nwere ọtụtụ ahụmahụ n'ọtụtụ ebenke ịntanetị. Ọ dị mkpa ịjụ onwe gị ihe ị ga-achọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ iheenwere nkwado azụ karịa nyocha ọchụchọ. Ọzọkwa, SEO n'ozuzu nwere ike ịpụta jaak nke azụmahịa nile, nke nwere ike ọ gaghị adabaraọdịnaya dị nro.
3. Ihe ize ndụ nke ọdịda traction ogologo oge
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ, otu nwere ike ịba ihe na atụmatụọganihu nke mgbalị SEO. Ọ bụrụ na gị n'ụlọnga adịghị arụpụta nsonaazụ ọhụụ maka ogologo oge, ọ dị mkpa iji dochie haya na nhọrọ nke oma. Cheta SEO abụghị otu oge, ọ ga-ewe ihe karịrị otu afọ iji nweta nsonaazụ.
4. Nhọrọ kacha mma
Ozugbo i kpebiri ihe ị ga-eme maka SEO, ọ dị mkpaịhọrọ site na ihu ego na-abaghị uru. N'ọtụtụ ọnọdụ, ịhọrọ otu ụlọ ọrụ ga-abụ nhọrọ kacha mma. Ezi ụlọ ọrụ SEOkwesịrị inyere gị aka nweta ego ị kwụrụ ma ọ bụrụ na ị baghị uru.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri gị ike ịmata ma ị chọrọ ime SEO naanị gịma ọ bụ rụọ ọrụ. Dabere na ihe mgbaru ọsọ na ikike nke ọrụ ịchọrọ, ịchọta nhọrọ kachasị mma nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Enwere ọtụtụnkatọ nke onye nwere ike ịgbaso iji dozie ọnọdụ ndị a. Otú ọ dị, ego kachasị mma maka enyemaka SEO kwa ọnwa na 100 $ naO doro anya na enyemaka ọkachamara ga-aghọrọ gị uru dị ukwuu karịa ime ya n'onwe gị. Na-emetuta ihe omimi nke onyeNzuzu, ị nwere ike ịmepụta atụmatụ ka mma maka mmepe nke ụlọ ọrụ gị 'mmepe oge ogologo ma zere mmejọ ndị nwere ike iduga n' ọdịda ọdịda Source .